तीन वटी बिहे गरेर कारबाहीमा परेकालाई प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि ..
ARCHIVE, NEWSPAPER » तीन वटी बिहे गरेर कारबाहीमा परेकालाई प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि ..
जस्तो गुरु उस्तै शिष्य ! पार्टी अध्यक्षको सिको गर्दै महासचिवले पार्टीमा रहँदा अनेक काण्ड मच्चाए ।
काण्डै काण्डका बीच उनी नैतिक रूपमा यतिसम्म गिरे कि पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले उनलाई चारित्रिक र नैतिक स्खलन भएको आरोप लगाउँदै कारबाही गरे ।
त्यतिबेला उनी छाँगाबाट खसिन् जुन समय मनमैजुस्थित मेघराजको कोठामा श्रीमती बनेर सीता प्रवेश गरिन् । त्यहाँ ६ वर्षको बच्चाका साथमा जेठी श्रीमती थिइन् । आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै सीता जिन्दगीको रथ घिसार्दै थिइन् । बीचमा जेठी श्रीमती ६ वर्षको बच्चालाई छाडेर हिँडिन् । उनलाई लागेको थियो कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो । तर, नियतमै खोट भएको मान्छेको अगाडि कसको के लाग्थ्यो र ? सीताको मुहारमा खुसी त्यतिबेलासम्म मात्र टिक्यो जुन समयसम्म उनको पेटमा बच्चा आएको थिएन । जब गर्भ बोकिन् तब श्रीमान् टेढिए ।
यसरी काखे बच्चासहितको श्रीमतीलाई बिचल्ली पारेर उनीसहितको एउटा समूह केही दिनअघि मात्र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ, श्रीमती र काखेबच्चा रुवाएर माओवादी बनेका महासचिव मेखराज परियारले कस्तो क्रान्ति गरेर देखाउलान् ? – जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।